Hooyo Xaliimo, sanado badan ka dib oo ay si kalinimo ah ugu dadaalaysay seddexdeeda ilmood, waxaa haleelay xanuunka madaxa oo kaga soo billowday welwelka ay wiilkeeda ka qaaday iyo dacwooyin joogta ah uu Maxamed ku jiray intii uu dugsiga sare dhiganaayay balse weli hooyadii iyo walaalihii la noolaa. Markii xanuunki ku soo saa’iday hooyo Xaliimo, waxaa la go’aamiyay oo ay dowladdu go’aansatay in ilmaha laga wareejiyo oo aysan sii heyn kareynin maadaama iyada in la daryeelo ay u baahan tahay, halkaas ayaa Maxamed lagu geeyay guryaha dhalinta da’da yar lagu xanaaneeyo, labadii kalena reero daryeela loogu geeyay.
Dad badan oo ay qaraabo ahaayeen, ayaa aabo Xassan kula taliyay inuu ilmahiisa u dacwoodo maadaama aysan hooyadood waxba u qaban Karin. Muddo wuxuu ka leexleexdaba, maalin ayuu Xassan u tegay qeybta heysa ilmaha ee magaalada ay degenaayeen oo uu u sheegay inuu ilmahaas dhalay doonayana inuu isagu heysto. Waxaa la yiri, waa yahaye noo keen wax cadeynaya inaad dhashay, wuuna u keenay, waxaa loo raaciyay ilmaha ayaan kuu weydiinaynaa inay rabaan inay kula noolaadaan oo ballan baa loo qabtay. Markii ballanta la gaaray ayaa ilmihii loo keenay iyagoo la socda waalidkii loo geeyay markii hooyadood xanuunsatay. Xassan markuu ilmihii arkay ayuu xaggooda u soo istaagay, markaas ayey ka ordeen, waa kuwii reerka u yaraaye, oo waxa ay ku carareen waalidka hadda xanaaneeya. Waxaa lagu yiri waa aabahaa, markaas bey yiraahdeen waan ognahay balse ma rabno. Waxaa la yiri maxaa dhacay? Waxa ay yiraahdeen ma dooneyno inaan raacno, waayo haddaan raacno ma helayno waxa aan hadda helno oo cayaarta ah, bannaanka aan aadeyno iyo shaleemooyinka. Afar iyo labaatanka saac guriga ayaan ku jiraynaa. Iyadoo sidaas loo hadlaayo ayaa albaabka waxaa ka soo galay Maxamed oo ay la socdaan dadka dhalinta yar yar xanaaneeya, markaas ayuu Xassan soo aaday Maxamed xaggiisa isna yiri salaan. Maxamed waxa uu abihii ku yiri, intaan saan noqonaynay xaggeed naga jirtay? Ma maantoon baaba’nay ayaad na soo raadisay hooyadeenna ay ku jirto isbitaalka dhimirka? Aabbo adigaa shalay na dayacay oo waqti noo waayay ee macasalaama.
Xassan oo wax uu sameeyo la’ ilmihiina wada diideen, isagoo qoomamaynaya, ilmaduna ka socoto, dareensanna waxa uu sameeyay, hoostana ka leh “maxey Xaliimo ila talisay oo aan taladeeda diiday, maanta waa wiilal la’aan guri la’aan iyo kalinimo. Ilaahaan qabaa” ayaa halkii ka dhaqaaqay.
Xaaji Jayte oo walwal badan ka muujiyay mustaqbalka dalka. »